Yintoni iAd Server? Isebenza njani iAd Ad?
NgeCawa, nge-7 kaJanuwari 2018 NgoMgqibelo, uJanuwari 6, 2018 Douglas Karr
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Ingakhangeleka ngathi ngumbuzo ophambili, "Zithunyelwa njani iintengiso kwiwebhusayithi?" Inkqubo inzima kakhulu kwaye yenzeka ngexesha elifutshane ngokumangalisayo. Kukho abapapashi kwihlabathi liphela ababonelela ngababandakanyekayo, ekujoliswe kubo ngabathengisi abazama ukufikelela kubo. Ke kukho iintengiselwano zentengiso kwihlabathi liphela, nangona kunjalo, apho abathengisi banokujolisa, babize, kwaye babeke intengiso. Yintoni iiseva zeAd Ad Server ziinkqubo